Supreme court, high courts hears Madzore and Glenview residents’ fresh bail bids - The Zimbabwean
Supreme court, high courts hears Madzore and Glenview residents’ fresh bail bids
The Supreme Court will on Wednesday 9 November 2011 hear an application filed by seven Glenview residents appealing against the decision of High Court Judge Justice Tendai Uchena, who threw out their bail application in July.
Deputy Chief Justice Luke Malaba will hear the residents’ appeal in chambers at 10:00 hrs at the Supreme Court filed by their lawyer, Charles Kwaramba of Mbidzo, Muchadehama and Makoni, who is a member of Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
The seven Glenview residents namely, Glenview Ward 32 councillor Tungamirai Madzokere, Rebecca Mafikeni, Phenias Nhatarikwa, Lazarus Maengahama, Stanford Maengahama, Yvonne Musarurwa and Stanford Mangwiro have been detained in remand prison since the time when they were arrested in May for allegedly murdering a police officer, Inspector Petros Mutedzi.
Their bid for bail was dismissed by Justice Uchena, who on 1 July 2011 threw out their bail application after ruling that they could flee from the country.
Meanwhile, the High Court will on Wednesday 16 November 2011 consider a fresh bail application filed by Solomon Madzore, the Movement for Democratic Change Youth Assembly chairperson whose first bail bid was vetoed by High Court Judge Justice Hlekani Mwayera last month.
Madzore, who is represented by Gift Mtisi of Musendekwa and Mtisi Legal Practitioners was arrested on Tuesday 4 October 2011 and charged with murdering Inspector Mutedza.